‘सभापति भएकै कारण गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले नसोचेको मत ल्याएको हो’
नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ ३ नम्बर क्षेत्रीय सभापति गणेश खड्कासँग ब्लाष्ट दैनिकका पथरी संवाददाता दिनेश सुब्बाले गरेको कुराकानी :
नेपाली काङ्ग्रेस १४ औं महाधिवेशनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
– हामी पार्टीको सर्कुलर अनुसार क्रियाशील सदस्य नवीकरणलगायतका काममा लागिरहेका छौं । हाम्रो क्षेत्रमा तीन नगर र एउटा गाउँपालिका गरी २६ वटा वडा रहेका छन् । नवीकरण वडाबाट आइरहेको छ । हामी पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न लागिरहेका छौं ।
– यो क्षेत्रमा पहिला २१ सय थियो । केही बसाइ सराइ, कोही देहान्त हुनुभयो । नयाँ तथ्याङ्क आइसकेको छैन । कस्ता सदस्यलाई क्रियाशील दिने भन्ने विषयमा विधान प्रष्ट छ । साधारण सदस्य लिएर सङ्गठनमा काम गरेको हुनुपर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा सहयोग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । क्रियाशील सदस्यहरुको सहभागिता रहेको वडा कार्यसमितिको बैठकले सिफारिस गरेर नाम पठाउनु पर्ने हुन्छ । अर्को पार्टीबाट आएका सदस्यहरुलाई त्यो पार्टीमा रहँदाको हैसियतलाई पनि हेर्ने भन्ने छ । यद्यपि वडा कार्यसमितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको विधानअनुसार योग्यता पुगेका साथीहरुलाई क्रियाशील सदस्य उपलब्ध हुन्छ । शुरुमा कायम रहेको ५० प्रतिशत बढीलाई दिने भन्ने थियो । अहिले शतप्रतिशत दिने भन्ने छ ।
तपाई क्षेत्रीय सभापति फेरि उठ्नु हुन्छ ?
– म हिजो २ नम्बरको सभापति थिएँ । अहिले २, ३ र ८ नम्बर क्षेत्र मिलेर एउटा ३ नम्बर क्षेत्र बनेको छ । मैले नेतृत्व गर्दा यो क्षेत्रमा मत बढी खस्यो । क मा सूयर्माराज राई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुनुभयो भने प्रदेश ख का उम्मेदवार ललितबहादुर श्रेष्ठ थोरै मतले पारजित हुनुभयो । सङ्घमा डा. सुनिल शर्माले ४० हजार ५ सय ६ मत ल्याएर प्रतिद्वन्द्वीसँग थोरै भोट फरकमा परजित हुनुभयो । हाम्रो क्रियाशीलताले क्षेत्रमा जनताले राम्रो मत दिनुभएको मूल्याङ्कन छ । हामीले राम्रो मत ल्याउनुको साथै र सङ्गठन सुधार गर्न सफल भयौं । त्यही भएर पार्टीका साथीहरुले एक पटक उठ्नु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । त्यही भएर पार्टीलाई अझ सुधार गर्न मलाई पनि उठ्नु पर्छ भन्ने लागेको छ । पार्टी सुधारको लागि एक पटक मौका दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।
मिति नजिकिँदै गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि वडाबाटै जानुपर्ने प्रस्ताव आइरहेको छ । तपाईको मत के छ ?
– पार्टीको विधानमा प्रदेश, सङ्घको सांसद्को उम्मेदवारहरु, निर्वाचन सांसद् केन्द्रीय सदस्यहरु, केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिहरु महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति र महासमितिको निर्णय अनुसार र विधान अनुसार नै जानु पर्दछ भन्ने लाग्छ ।
जिल्ला सभापतिहरुले सबै नेताहरु वडाबाटै निर्वाचित हुँदै आउनु पर्छ भन्ने मुद्दा उठाइरहेका छन् नि ?
– हाललाई विधान अनुसार नै जाँदा राम्रो । पार्टीले नयाँ निर्णय गरेमा लडेरै भए पनि जानुपर्छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन ।
केन्द्रीय सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र शेखर कोइराला आकांक्षी देखिएका छन् । सबै उठे कसले बाजी मार्ला ?
– हालसम्म उम्मेदवार नै को को भन्ने टुङ्गो भएको छैन । कोरोनाको कारण विश्व सङ्क्रमणमा छ । केन्द्रको निर्देशन अनुसार हामीले पनि काम गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले नै कसले जित्नुहुन्छ भनेर अड्कलबाजी गर्न सकिँदैन ।
– उम्मेदवार बन्ने टुङ्गो लागेको छैन । शेरबहादुर देउवा दाइ वर्तमान सभापति हुनुहुन्छ । उम्मेदवार नै टुङ्गो नलागेकोले अहिले यसै भन्न सकिन्न ।
तपाईं पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको मेयर पदमा उठेको निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी पनि हुनुहुन्छ, नगर कसरी चलिरहेको छ जस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
– निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवार बनाएपछि मलाई जनताले दोस्रो मत दिए । नगरले अहिले जे काम गर्दैछ, त्यसबारे हामी अनभिज्ञ छौं । हामीलाई औपचारिक रुपमा केही जानकारी दिइँदैन । गम्भीर विषयहरुमा हिजोका उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो । नगरपालिकाबाट हामीसँग समन्वय छैन । कहिलेकाहीँ हाम्रो पार्टीलाई बोलाउँदा प्रतिनिधि जानुहुन्छ र हामीलाई पार्टीमा जानकारी गराउनुहुन्छ । यस्तै मात्र चलिरहेको छ ।
यहाँको स्थानीय सरकारलाई गतिशील गर्न रचनात्मक प्रतिपक्षी भएन भन्छन् नि । किन ?
– हेर्नुस् सबैकुरा राजनीति रहेछ । स्थानीय सरकारमा हाम्रा जनप्रतिधि कम छन् । नेकपाको पूर्ण बहुमत छ । माथि केन्द्र, प्रदेशमा प्रतिपक्ष हुन्छ । स्थानीय तहको बेञ्चमा प्रतिपक्ष हुँदैन । सदनमा बेञ्च नभएपछि बाहिरबाट सहयोग गर्ने हो । हामीले हरेक कुराको सुझाव सल्लाह, समस्याहरु मेयर साथै कार्यपालिका सदस्यहरुलाई भेटेर, फोन र ज्ञापन–पत्रमार्फत् घच्घच्याइरहेका छौं । पथरीको समस्याहरु के के हुन् ? सुझाव दिएका छौं । प्रतिपक्ष भनेर नगरपालिकामा ताला लगाउने, तोडफोड, टायर बाल्ने, बजार बन्द गर्ने काम चाहिँ भएको छैन । अन्य सुझाव दिएका छौं ।
अन्तमा केही छन् ?
– नेपाली काङ्ग्रेस १४ औं महाधिवेशनको सँघारमा छ । हामी पार्टीको काममा छौं । पार्टीको विधानअनुसार रहेर क्रियाशील नवीकरण, नयाँ सिफारिस लगायतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौं । क्रियाशील साथीहरुलाई पनि गाउँ–गाउँमा पार्टीलाई स्थापित गर्न जनताको काममा लाग्न र सङ्गठनलाई गतिशील बनाउन लाग्न आग्रह गर्दछु ।
म नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार ‘उपविजेता’ भएकोले नगरको भवन कहाँ रहने, अव्यवस्थित दोहोरो स्वामित्वको सुकुम्बासीको समस्य कसरी समाधान गर्ने, कर बढिरहेको जनतामा गुनासो छ । छिटोछरितो सेवा नपाएकोमा जनता खुसी छैनन् । विकास निर्माणमा पारदर्शिता, गरिबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या समाधान, बसपार्क, शौचालय, बालउद्यम, वृद्धाश्राम व्यवस्थित गर्न मेयर साव र कार्यपालिकालाई यो मिडियामार्फत् पनि आग्रह गर्दछु ।